Semalt - Hay'ad Dijital ah oo loo yaqaan 'Renown Digital Agency'
Semalt waa hay'ad caan ku ah adduunka dijitaalka ah oo ku takhasustay Mashiinka Raadinta Mashiinka iyo Falanqaynta Websaydhada. Laga bilaabo daqiiqada aad gujiso websaydhkooda, way iska cadahay inay leeyihiin faham qoto dheer oo ku saabsan sida ay u soo jiitaan dareenka khadka tooska ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin, u yeerista ficillada tooska ah, iyo adeegsiga midabka. Adoo leh koox aqoonyahanno ah oo karti badan oo sifiican ugu hadla luqado kala duwan, way fududahay in la arko sababta Semalt u leedahay boqolaal dib u eegisyo fiican iyo natiijooyin ka yimid adduunka oo dhan. Oh, oo ma ilaawi kartid inaad tiraahdid Hi to Turbo theurte!
Kahor intaanan u boodin baakadahahooda, bal aan u burburinno wax kasta oo ay sameeyaan.
Kor u qaadista Mashiinka Raadinta (oo sidoo kale loo yaqaan SEO) waxay si firfircoon u kordhineysaa taraafikada lagu soo rogo websaydhkaaga iyadoo la kordhinayo aragtida boggaaga ee Mashiinka Raadinta. Si aad ugu muuqato natiijada Adeegga Mashiinka Raadinta, boggaagu wuxuu u baahan doonaa inuu ku yaal Indexing waa geedi socodka Mashiinka Raadinta ee xog aruurinta Spider (oo sidoo kale loo yaqaan Bot ama Crawler) sidaa darteed waxay u habeyn kartaa waxyaabaha ku habboonaanta waxkasta oo ku jira xogteeda. Si Spider uu u helo boggaaga, waxay u baahan doonaan inay ogaadaan isku xirkaaga inta ay ka baarayaan degel kale. Daahfurka waxaa loo yaqaan 'Backlinking'.
Mar haddii Spider uu helo boggaaga, waxay aruurin doontaa wixi kasta oo macluumaad ah oo ay ka heli karto illaa ay ku xirnaato meel ka fog bartaada. Mashiinka Raadinta ayaa markaa siin doona maadadaada dhibco ku habboon, oo caawin kara ama dhaawici kara meelayntaada SERP (Raadinta Natiijooyinka Mashiinnada Raadinta). Marka Mashiinka Raadinta lagu qiimeeyo boggaaga, wuxuu xukumi doonaa waxyaabaha soo socda:
Luqadda Mawduuca: Adeegsiga ma akhrin karaa nuxurkaaga
Mudnaanta Mawduuca: Mawduucyadaagu miyey ku habboon yihiin muddada raadinta?
Qoraalka Jirka: Intee in le'eg ayey u egtahay waxyaabahaagu u dhigma eray raadinta?
Cinwaanka Bogga: Waa maxay halka ugu muhiimsan ee maqaalkaagu yahay?
Sawirro iyo Sawirro: Maqaalka muuqaalka ah ayaa taageeraya waxyaabaha aad ka kooban tahay?
Goobta: Goobta aad ka kooban tahay ma ku tiirsan tahay?
Iyada oo leh dhammaan SEO-gaaga si sax ah, waa inaad haysataa durdur joogto ah macaamiisha suurtagalka ah adigoo gujinaya websaydhkaaga. Laakiin sideed si aan macquul ahayn ugu sheegi kartaa in shabakadaada ay gaareyso bartilmaameedyadeeda? Kaliya taa maaha, laakiin sidee ayaad u sheegi kartaa haddii dhagaystayaashaadu ay ka falcelinayaan habka aad u rabto iyaga? Hubsiimo, marwalba waan eegi karnaa warbixintaada iibka waxna waan ka xukumi karnaa taas. Laakiin dhamaan warbixinada iibka ayaa kuu sheegaya inta lacag ee aad sameysay. Haddii aad runtii rabto inaad fahanto sida macaamilku uga falcelinayo bartaada internetka, waxaad u baahan doontaa inaad si qoto dheer u qoto barnaamij barnaamijka 'Analytics' ah.
Falanqaynta Webka waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro, la soo ururiyo, laguna falanqeeyo warbixinnada iyada oo la doonayo in la fahmo caadooyinka dhagaystayaashaada si aad si habboon ugu habeyn kartid bartaada internetka. Barnaamijyadan ayaa ku siin doona macluumaad muhiim ah waxyaabaha soo socda.
Goob joqoraafi ahaan
Tirada guud ee booqashooyinka aan caadiga ahayn
Wadarta Tirada Booqashooyinka Soo Noqoshada
Taasi waa macluumaad badan oo lagu kala wareego! Laakiin muhiim ayey kuu tahay inaad tan haysatid maxaa yeelay waxay kaa caawin doontaa inaad kor u qaaddo jiritaanka websaydhka si buuxda. Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta bogga, waxaad ku gaari kartaa go'aan sax ah waxyaabaha soo socda:
Go'aanso ereyada furaha ah ee taraafikada u qaadaya bartaada internetka.
Go'aan ka gaadh badeecada sida ugu badan u ururinaysa.
Isbeddellada ku saleysan is-dhexgalka macaamiisha.
Fursadaha Spot in la hagaajiyo.
Abuur waxyaabo ku habboon jaantusyadaada.
In kasta oo ay suuragal tahay in aad waxaas oo dhan wada qabatid, waqti ayey qaadaneysaa in aad si buuxda ganacsigaaga u kobciso. Sida nolosha dhabta ah, waxaad had iyo jeer soo jiidan doontaa dukaammo daaqado ka badan kuwa macaamiisha dhabta ah. Marka waxaad u baahan tahay inaad dadaalkaaga ugu fiican hor dhigto sidii aad u soo jiidan lahayd dad badan intii suurtagal ah. Taasina waa sababta ay tahay inaad u qorto Semalt!
Haddii aad eegto bogga kiiskooda , waxay ka caawiyeen boqolaal shirkadood oo adduunka oo dhan ah inay helaan lambarada gujiska ah ee lagama maarmaanka u ah macaashka. Kiis kasta wuxuu leeyahay xiriiriye galaya waxyaabaha soo socda:
Talo soo jeedinta Macmiilka
Waraaqaha Metric ka hor iyo kadib
Sida aad ku arki karto muuqaalka kore ee aan kor ku soo sheegay, Semalt wuxuu kordhiyay shirkadahaan bil kasta soo booqda ee ka socda 114 isticmaale ilaa 1,771 adeegsadeyaal! Taasi waa 15 jeer tirada isticmaaleyaasha ay horey u lahayeen! Tani waa waxa ay macaamilku ka oran lahaayeen natiijadooda:
Iyo haddii dib u eegista qoraalka ah iyo lambarada adag aysan ku filneyn, Semalt wuxuu sidoo kale leeyahay bog loogu talagalay dib u eegista fiidiyaha. Faallooyinkaasi waxay ka yimaadeen macaamiisha qanacsan adduunka oo dhan!
Marka sidee Semalt ku siin karaa natiijooyin isku mid ah? Waxa ugu horreeya ee aad sameyn karto waa inaad ka faa'iideysato dalabkooda tijaabada ah ee Yavuz oo ka socda qalliinka qalliinka ee loo yaqaan 'surgerytr.com' Sida ugu dhaqsaha badan markaad riixdid Semalt.com, waxaad kaheleysaa bar ah oo isla markiiba baari doona boggaaga. Si aad u aragto warbixintan, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysatid waa inaad sameysato koonto. Warbixintani waxay soo koobi doontaa natiijooyinka laga helay boggaaga internetka waxayna kugula talin doontaa xirmo gacan ka geysan doona kordhinta natiijooyinkaan. Xirmooyinkaas waxaa ka mid ah AutoSEO , FullSEO , iyo Analytics.
AutoSEO waxay ku siineysaa aaladaha soo socda:
Hagaajinta Muuqaalka Websaydhka
Kor u Qaadka bogga
Cilmi Baaris Keyword
Warbixinnada Falanqaynta Webka
Kuwani waa dhismayaasha loo baahan yahay in la bilaabo olole guuleysta oo SEO ah! Xitaa haddii aad baranayso SEO ahaan markaad socoto, aaladaha kuugu jira xirmada Auto SEO waa ay fududahay in lagu dabaqo degelkaaga. Kani waa kan ugu badan ee la awoodi karo, dhaqso, iyo xirmo wax ku ool ah Semalt ay bixiso.
Waxaad iibsan kartaa 14 maalmood oo tijaabo ah oo ah 99 senti. Taas ka dib, waad iibsan kartaa xirmooyin bille ah qiimayaasha soo socda:
1 bil $ 99
3 bilood $ 267
6 bilood $ 504
1 sano $ 891
Xidhmada FullSEO waxay leedahay mid ka mid ah xirfadleyda Semalt xirfadiisa ku qanciyay waxa soo socda:
Samaynta Cilad Websaydh
Taageero iyo La-tashi
Qorshahan, hadafka Semalt waa in lagu riixo websaydhka aad ugu sareysa SERPs. Mid ka mid ah xirfadlayaashan shaqada qabtay ayaa loo xilsaaray boggaaga si ay u wada isticmaali karaan dhammaan agabyada ay awoodaan si ay boggaaga uga dhigaan mid si aad ah u guuleysta. Sidaad horay ugu aragtay bogga qalliinka ee loo yaqaan 'surgerytr.com', waxay isla markiiba boodi karaan bogga oo ay bilaabi karaan inay si dhakhso leh u shaqeeyaan sixirkooda.
Oo kaliya haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato waxa ku saabsan mihnadyadooda, waxaad ka heli kartaa sawirradooda oo dhan websaydhka. Tusaale ahaan, Yana Shafarenko (Khabiirka SEO) iyo Natalia Khachaturyan (Istaraatiijiyadda Mawduuca) waxaa lagu soo bandhigay "ilaalinta ilaalintooda" bogga hore ee websaydhka Semalt. Hoos waxaa ku yaal liisaska waxqabadka ay gaareen intii ay u shaqeynayeen Semalt.
Dhowr ka mid ah khubaradooda ayaa sidoo kale qoraala maqaallo loogu talagalay blog-ka Semalt. Vladislav Polikevych (Copywriter), Olga Pyrozhenko (Maamulaha Suuqgeynta), iyo Eugene Serbin (Madaxa SEO) waxay qoreen dhowr qoraalo oo ku saabsan isbeddelada hadda SEO iyo ka faa'iideysiga suuqaaga. Oo miyaan xusay in ay leeyihiin 26 bog oo maqaallo maqaal ah? Iyada oo leh shan qodob oo ku yaal bog kasta iyo laba maqaal oo ugu dambeeya, taasi waa wadar ahaan 127 maqaal (sida hadda ah) oo la heli karo BILAASH! Inta u dhaxaysa marqaatiyadooda macmiilkooda iyo qodobbada ay si bilaash ah ugu soo bandhigayaan bartooda, waxaad haysataa ilo badan oo aad tixraaci karto ka hor intaadan go'aan ka gaarin iibsashada xirmada Semalt ee Buuxda ee SEO.
Xidhmada buuxda ee SEO waxay ku kala duwan tahay macaamiisha, sidaa darteed, nasiib darro, kuma siin karo qiime toos ah. Laakiin sida aan kor ku soo sheegay, qiyaasta xad dhaafka ah ee dib-u-eegista wanaagsan iyo ololayaasha guuleysta waxay la hadlayaan sida qiimaha leh ee xirmada Semalt ee buuxa ee SEO ay u qalanto. Waxay kaloo bixiyaan qiimo dhimis haddii aad iska qorto rukhsad bille ah:
3 bilood waxay bixisaa 10%
6 bilood waxay bixisaa 15%
12 bilood waxay bixisaa 25%
Ugu dambayntiina, waxaa jira baakadka Semalt Web Analytics, oo ay ku jiraan adeegyadan soo socda:
Jeegareynta qiimeynta websaydhka
Soo bandhig muuqaalka websaydhka
Baadh bogagga shabakadaha tartamaya
Aqoonso fursadaha kobcinta bogga
Kani waa xirmada kuu sheegaysa haddii shaqadaada oo dhami ay kuu horseedaan guul ama muujinta waxaad haysataa shaqo badan oo aad qaban lahayd. Aqoon la’aantaan, uma badna inaad ku faafin kartid degelkaaga bogga sare ee 'SERPs', ama joogtid meesha ugu sareysa haddii aad horey u joogtid. Aqoontu waa awood. Awooddaas, waxaad ku sameyn kartaa qaar ka mid ah waxyaabaha soo socda:
U fiirso tartankaaga si aad u aragto waxa ay qabanayaan
Is barbar dhig daraasadahaaga eraygaaga muhiimka ah waxa hadda socda
Kala soo bax fursadaha ka dhex jira websaydhkaaga
Marka laga hadlayo qiimaha, waxay bixiyaan baakado leh erey fure iyo xaddidan xirmo. Waxay u egyihiin sidan:
$ 69 / bishii 300 furaha-fure, 3 mashruuc, iyo 3 bilood oo taariikhda booska
$ 99 / bishii 1,000 eray oo fure ah, 10 mashruuc, iyo 1 sano oo taariikhda booska ah
$ 249 / bishii 10,000 oo ereyaal fure ah, mashaariic aan xadidnayn, iyo taariikh aan xadidnayn
Haddii aad is qorto bilooyin badan, waad keydin kartaa waxyaabaha soo socda:
Inta u dhaxaysa dhammaan dib u eegista wanaagsan ee Semalt ku faanayo boggooda internetka, baloogyada iyo waraaqaha aqoonsiga ee ay leeyihiin xirfadlayaal luqado kala duwan leh, iyo qiimehooda la awoodi karo, way fududahay in la arko sababta Semalt uu u yahay mid ka mid ah wakaaladaha dhijitaalka ugu fiican adduunka. Kaliya laga soo bilaabo bogga internetka, waxaad arki kartaa inay si dhab ah u daneeyaan waxa ay u sameynayaan SEO iyo Analytics